Tababare Arsene Wenger oo ka hadlay Shaxda Kooxda Arsenal iyo qaab ciyaareedka niyad-jabka leh oo ay ku billowdeen xilli ciyaareedkan – Gool FM
Tababare Arsene Wenger oo ka hadlay Shaxda Kooxda Arsenal iyo qaab ciyaareedka niyad-jabka leh oo ay ku billowdeen xilli ciyaareedkan
Haaruun September 14, 2021
(London) 14 Sebt 2021. Tababarihii hore ee Arsenal Arsene Wenger ayaa soo jeediyey in Gunners ay haysato shax dhammaystiran oo tayo leh, isla markaana uu rajaynayo inay soo kaban doonaan.
Arsene Wenger waxa uu rumeysan yahay in Arsenal ay qaab ciyaareed cajiib ah dib ugula soo laaban doonto Premier League, kaddib markii ay ku billowdeen horyaalka qaab qarow ah fasal ciyareedkan.
Gunners ayaa ugu dambeyntii dhalisay goolkeedii ugu horreeyey horyaalka kal ciyaareedkan kulankii Sabtidii, waxaana sidoo kale ay heleen dhibicdoodii koowaad, markii uu Pierre-Emerick Aubameyang gool uu dhaliyey ay 1-0 uga adkaadeen Norwich.
Laakiin natiijadaas ayaa timid kaddib markii saddexdii kulan ee ka horreeyey si isxiga ay guuldarrooyin ugala kulmeen Brentford, Chelsea iyo Manchester City, waxaana natiijooyinkaasi ay ku hoggaamiyeen kooxda Tababare Mikel Arteta inay hoos ka hoggaamiyaan horyaalka.
Haddaba Wenger, kaasoo kooxda Arsenal soo maamulay intii u dhexeysay 1996 ilaa 2018, isla markaana kula guuleystay saddex horyaal ayaa ku adkeysanaya tayada uu leeyahay Arteta inay la micno tahay inay bilaabi doonaan inay markale miiska kala sarreynta dib u soo koraan oo ay kor isku qaadi doonaan.
“Marka hore, si daacad ah waxaan jeclahay inaan sida caadiga ah sheego waxa aan u malaynayo, waxaan ka aaminsanahay xaaladdan, waxaan ahay taageere Arsenal ah,” ayuu u sheegay beIN SPORTS.
“Intaa kaddib, dabcan, markaan ka hadlayo Arsenal waa mowduuc xasaasi ah waqtigana ma’ahan waqtiga ugu fiican in laga hadlo.
Wenger waxa uu ku adkeystay inay Arsenal tahay koox tayo buuxda leh, balse saddexda kulan ee hore labo ka mid ah ay ahaayeen kuwo adag mid ay Chelsea gurigooda ku soo dhoweeyeen iyo mid ay aadeen Manchester City.
Waxa uu sidoo kale xusay in natiijo xun ay heleen kulankii ugu horreeyey ee Brentford, laakiin waxa uu carrabka ku adkeeyey inay soo kabsan doonaan oo waxa uu u rajeeyey inay markale kaalimaha hore ee horyaalka soo tiigsan doonaan marka ay joogteeyaan guulahooda.
Arsenal ayaa rajaynaysay inay si xiriir ah guulo u gaarto kulanka ay Sabtida u safrayaan Burnley, ka hor kulanka ay marti gelin doonaan AFC Wimbledon ee League Cup-ka afar maalmood kaddib kulanka Burnley.
Weeraryahankii hore ee Kooxda Chelsea iyo Xulka qaranka Senegal ee Demba Ba oo ka fariistay kubadda cagta
Madaxweynihii hore ee Kooxda Bayern Munich, Uli Hoeness: "Alaba waxa uu ii sheegay in riyadiisu ahayd inuu u ciyaaro Barcelona"